I-injini yeVenkile - 1D;ONE
Ukho kwindawo efanelekileyo I-injini yeVenkile.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana 1D;ONE.siqinisekisa ukuba ilapha 1D;ONE.
Xa kuthelekiswa nezinto eziqhelekileyo, izibonelelo ezimangalisayo zezinto zokungqina oko kulungileyo..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu I-injini yeVenkile.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
I-China ye-Auto Peper Aute Peper Auters Avers-1D; enye
I-1D; enye i-China ye-Inji ye-Aute ye-Aute Aute Auters - 1D; enye, imigca yemveliso engama-32, amandla e-PCS Piston, 200,000 i-PCS PISTUkunganyangeki kwe-corosion enamandla, uxinzelelo, ubushushu kunyeI-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Abavelisi be-perketUkunganyangeki
Ngokwezifiso i-4d3 ye-piston ye-piston mitston mitston mitsubishishishishishishishin abavela eTshayina
I-1D; enye isebenze kakuhle i-4D33 ye-piston mitston mitton mitston ivela eTshayina, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathiI-Alfin Fisso i-Mitsdo Mitsdo i-4D33 ii-Injini ze-Injini yeDiston 108mm for mi013312 me016896Silandela uMgaqo-nkqubo we-1D: Imveliso esemgangathweni, umthengi kuqala. Iimveliso zethu zikwiTekhnoloji yaseJapan kunye ne-Taiwan.I-4D33 yenye yezonamodeli zixhaphakileyo. Kwaye umgangatho weemveliso zethu zichazwa ngabathengi abaninzi. Asingenzi fit ilungileyo, kodwa sinikezela ngqo le nto uyifunayo.Wamkelekile ukunxibelelana nathi kwaye uqalise intsebenziswano yethu yokuqala.I-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Eyona i-4D33 ye-piston mitston mitston
I-Pictoloc Eclight Eags Enjini ye-injini ye-Piston Piston
I-1D; inye indlela efanelekileyo yokusebenza kwe-injini ye-injini ye-Piston ye-Piston, imigca yemihla ngemihla, amandla emihla ngemihla i-40 piston ye-PCS PISTIindawo ezi-1D ze-outo ngumvelisi wenxalenye ye-Auto agxile kwi-Injini ye-Injini yemoto.
I-Cylinder ephezulu ye-cylindinder ye-whotesale-1d Inxalenye ye-Auto Auto Co., Ltd.
I-1D; enye i-tenaleale yesiko lesilinda ngexabiso elifanelekileyo - i-1D; enye, uphando olunamandla& Ukuphuhlisa ubuchule: Qwalasela iimodeli ezingaphezu kwe-1600I-1D; umphezulu we-cylinder ephezulu ye-sholeves owleele-1d., I-LTD., UPhando oluKhulu& Ukuphuhlisa ubuchule: Qwalasela iimodeli ezingaphezu kwe-1600I-Cylinder Liner yinxalenye ye-cylindrical, ibekwe kumngxunya womzimba womzimba, kwaye ilungiswe yintloko yesilinda. I-piston yenza ukuba ivuselele intshukumo yayo yangaphakathi kunye namanzi okupholisa anikezelwa ngaphandle. Umsebenzi we-Liner Liner zezi:1. Indawo yokusebenza ye-cylinde yenziwa kunye nentloko yesilinda kunye nepiston.2. I-cylinder liner ye-cylindrical piston dissel i-injini ye-piston icala le-piston kwaye iba sisikhokelo sentshukumo yokufumana ipiston.3. Dlulisa ubushushu beNdibano ye-Piston kwaye ngokwayo kumanzi apholileyo ukuze usebenze kubushushu obufanelekileyo.4. I-Cylinder Sleve ye-injini yedizili ezimbini ilungiselelwe i-port ye-air, evuliwe kwaye ivaliwe yipiston ukufezekisa ukusasazwa komoya.I-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Intro yokusetyenziswa kwe-panty lirs 1d amalungu e-Auto Co., Ltd.
I-Automotive I-Automotive Aguge I-Autolmotive ye-Iridium Spark iplagi ye-1D
Iplagi ye-1D Brand Spark, eJapan nge-NKK, Donson, iPlok plug yeTekhnoloji yeTekhnoloji yeTekhnoloji yeTekhnoloji edityanisiweyo. Iimveliso zigubungela iplatinam yePlatinam yePlatinum yePlat, iPlatinam Spark, i-Icuriful Spark yePlag, i-Iridium Spark plug, ezinye iimodeli.
I-Pistoning esemgangathweni esenziwe ngayo i-Aluminium ye-Alominum Pistons Popper Pistons nge-1D manuteupust
I-piston nganye ye-1D ye-1D ichaphazele unyango. Injongo yonyango lobushushu kukuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo kwepiston kwi-injini ngaphandle kokusilela.I-1D nganye yepiston yenziwa sisixhobo somatshini we-TAIWAAN ukuqinisekisa ukuchaneka kwemveliso. Umntu ngamnye uye wavavanywa ngesandla ukuqinisekisa ukuba ubungakanani benkcukacha yemveliso.Okokugqibela, imveliso iya kucoca i-ultrasonic ukucoca, emva koko yenze unyango olufanelekileyo.Okwangoku, unyango lomhlaba esinokusinika: i-piston tin ibeka i-piston phostop phostop piston skit piston skit (i-tin ibeka i-prospoting skt). Injongo yolu nyango luhlu kakhulu kukuphucula ukungqubana phakathi kwe-piston kunye ne-cylinder liner ngexesha lokuqalisa kwenjini. Phepha umngcipheko we-cylinder transling.) Unyango lwe-piston (injongo yonyango lwe-piston (injongo yonyango lwe-anode kukuphucula ubulukhuni beNtloko yePiston, ukuze i-carbon ayinakukwazi ukungena kwi-Piston)
I-piston yeqondo lobushushu ephezulu ye-piston kunye ne-piston ye-piston esetyenziselwa abavelisi beemoto ezivela eTshayina
I-1D; enye yefilithe i-piston yeqondo lokunganyangeki i-piston kunye ne-piston isetyenziselwa abavelisi beemoto ukusuka eTshayina, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathiIindawo ezi-1D ze-outo ngumvelisi wenxalenye ye-Auto agxile kwi-Injini ye-Injini yemoto.
Eyona nto iphambili emgangathweni we-piston ye-piston
I-1D; enye eyona iphambili emgangathweni ye-Piston ye-Piston Piston Primer Primar, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathiI-1D; enye ye-piston yomgangatho we-piston, i-Japan NPR kwaye i-170 ifanelekile i-Tectians eqeqeshiweyo, i-CCIP i-CCIP, i-ISTL69494, I-ISO-2015 evunyiweyo.I-1D ye-1D i-piston yomzi-mveliso we-piston, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathi
Intsebenzo ephezulu ye-injini ye-injini yokuchaneka kwe-1D
I-inlet endelene kunye nokusebenza kakuhle, umsebenzi ofanelekileyo, ukuthunyelwa okuhleIndima ye-valve yemoto inoxanduva lokwenza umoya kwi-injini kwaye ikhuphe igesi yokuphelisa emva kokudibana. Ukusuka kulwakhiwo lwe-injini, yahlulwe ngevalve etyhafileyo kunye nevalve yokuphelisa. Umsebenzi wevalve ethathayo kukutsala umoya kwi-injini kwaye umxube kwaye utsha ngepetroli; Umsebenzi weValve engapheliyo kukukhupha igesi etshisiweyo kwaye ibubushushu. Iimpawu zomonakalo we-valve zemoto zezi zilandelayo:1. Kuya kuchaphazela ukusebenza ngempumelelo kwe-injini, kwaye amandla emoto aya kuncitshiswa;2. Kuya kwenzeka iingxolo ezingaqhelekanga, kwaye injini iya kufumana i-injini engazinzanga okanye intshayelelo ngexesha lokusebenza, kwaye intsebenzo enziweyo iya kuncitshiswa. Kwiimeko ezinzima, iya kubangela ubunzima ekuqaliseni i-injini, ukusilela ukulahla, kwaye imoto iya kuvela i-phenomenon yokuphumeza komoya okanye idiphozithi;3. I-valve eyaphukileyo iya kukhokelela ekusebenzeni okungazinzanga kwisilinda. Ukungazinzi kwesilinda kuya kubangela ukuba injini inyikime, i-injini ibuthathaka, kwaye umbhobho wokuphelisa uya kuvalwa. Kwiimeko ezinzima, iya kubangela ukupheliswa kukukhupha umsi omnyama.
Ingcali yeengcali ze-injini ye-injini ye-injini
I-1D; enye yengcali yomenzi we-injini ye-injini ye-injini ye-injini, impahla yokusebenza ngokulula& isitokhwe esaneleyoIoyile yenjiniI-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Abavelisi beoyile ye-injiniIbhokisi yegiya yibhokisi yegiya, kwaye i-Gearbox yeoyile yioyile yeGearbox, kwaye i-Gearbox yeoyile yikota edibeneyo. Iibhokisi zegiya zahlulwe zaba ziibhokisi ze-gearbes zencwadana kunye neebhokisi zegiyela ezenzekelayo. Ioyile yeGearbox isetyenziswa kakhulu kwiibhokisi zegiyela ezenzekelayo. Yimveliso yeoyile esetyenziselwa ukugcina inkqubo yothumelo icocekile kwaye inokudlala indima ekuthambiseni nasekuseni ubomi bosulelo lwegiya.
Eyona mgangathweni ilungileyo yePlag
I-Intro esenziwe ngokwezifiso ukuya kwi-Spark Plug ye-TOOR CO., LTD. abavelisi base China
I-1D; i-Intro efakwe kwi-Intro kwi-Spark plug 1d I-Auto Count CO., Ltd. Abavelisi base China, kwiMakethi& Inkonzo yabaThengi: Vula ivenkile ethe ngqo kunye ne-ofisi yorhwebo, ufezekisa abathengi "ngoncedo lwalo lonke uncedo" lwasemva kwentengiso.Iplagi ye-Spark isetyenziselwa ukwazisa umbane we-voltage ephezulu (i-10,000 volts okanye ngaphezulu) ukusuka kwi-coil yokufumana i-injini, ukudala umxube we-spark phakathi kwe-ENGRODS.I-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Intro ukuya kwi-Spark plug 1d I-Auto Authe CO., Ltd.